VRIESIA UBAX: SHARAXAAD IYO SAWIR KA MID AH NOOCYADA UGU MUHIIMSAN - SOOSAARKA DALAGGA
Vriesia ubax: noocyada ugu caansan
Ubaxa Vriesia ayaa iska leh qoyska Bromeliad wuxuuna leeyahay in ka badan 250 nooc. Asal ahaan ka yimid South America iyo Brazil. Waxaa lagu magacaabaa sharaf ka mid ah khabiirka beeraha ee Dutch ah Willem Henrik de Vries oo asal ahaan soo gashay magaca Friesia. Waxaa lagu kori karaa jilifaha geedaha iyo jilbaha. Sida orchid, ubax waxaa loo tixgeliyaa epiphyde. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii guri guri ah waxaana lagu koray dheriyo leh substrate gaar ah. Nooc kasta waa asal, ubax kala duwan. Qaadashada boodhka, daboolay ubaxa. Nasiib darro, si dhakhso ah ayey u engegan yihiin, laakiin dhirbaaxada ayaa dhawr bilood lagu hayaa.
Ubax dhalinyaro ah oo leh ciriirin daryeel oo ku habboon 3-4 sano.
Vriesia leh caleemo cagaaran
Tani waa ubax isku mid ah oo qaali ah. Waa wax aan qabyo ahayn, laakiin haddii aad filayso ubax, waxay u baahan doontaa dareen. Caleemaha waa cagaar cad, laakiin waxay leeyihiin siyaalo badan oo aan lahayn qaabab iyo xadhko. Xitaa xilliga uusan kuusan ubaxin, waxay u egtahay in ay ku faani karto oo ay ku raaxaysato sharafteeda.
Vriesia ayaa loola cararay (Vriesea carinata)
Warshadu waxay leedahay cagaar cagaaran oo caleemo la'aan ah oo aan lahayn qaab, si ballaadhan oo qoorta loo uruuriyey, oo ku wareegsan rosette geel ah. Dhererka caleenta vriezii kelevata wuxuu gaaraa 25 cm. Intii lagu guda jiro ubax, peduncadu waa la furaa, waxay noqon kartaa mid toosan ama toosan. Duufaanku waa dhuuban, flat, 5 cm dheer Cagaarka ayaa dhacaya November ama December.
Ma taqaanaa? Magaca saxda ah waa Friesia. Ereyga "vrieziya" waxaa laga helaa oo kaliya suugaanta Ruush ee beerta gudaha.
Royal Vriesia (Vriesea regina)
Waa geedka qaas ah oo ballaadhan. Khubarada waxay kugula talinayaan in lagu koriyo. Caleemaha ayaa ku jira rosette, dhererkoodu waa ilaa 1.2 mitir, ballacuna waa ilaa 18 cm, ubaxa waa weyn, waxay gaari kartaa ilaa laba mitir oo dherer ah. Inflorescence waxay u egtahay xayawaan. Marka geedka blooms, waxaa jira caraf udgoon. Midabka inflorescence wuxuu u dhexeeyaa cadaan ilaa huruud. Boorsada casaan ee qaabka doonta ah.
Waa muhiim! Kadib dhammaadka wareegga dhan ee koritaanka iyo ubax, dhirta hooyada ayaa dhinto. Sidaa daraadeed, geedi socodka waa in la dhimo.
Vriese calaacal (Vriesea psittacina)
Wuxuu ka tagaa midabka cagaarka cagaaran. Dhamaadka xaashida waa mid fiiqan oo hoos u dhacaya.
Ubaxadu waxay ku jirtaa inflorescence dabacsan. Koobka waa huruud, iyo corollas waa cagaar. Peduncle lafteedu waa casaan cad. Sababtoo ah noocyadan midabada oo waxay heleen magaceeda dhalaalaya.
Vriesia leh caleemo kala duwan
Tani waa wakiil dabacsan oo noociisa ah. Waxay soo jiidataa ma aha oo kaliya burooyinkeeda asalka ah, laakiin sidoo kale quruxda guud. Waxay u kala duwan tahay kala duwanaanta iyo qaabkeeda. Qaar ka mid ah beeralayda ubaxa waxay doorbidaan noocan oo kale xitaa adoo ah ubax, laakiin sababtoo ah midabka midabka leh. Midabada iyo qaababka wakiillada qaarkood waxay u eg yihiin midabada harayga.
Ma taqaanaa? Caleemaha vriezii had iyo jeer waxay noqdaan kuwo dareen ah iftiinka dhacdada.
Vriesia aad u qurux badan ama qurux badan (Vriesea qurux badan)
Wareegtada vriezii waxay ka baxdaa wax yar, waxaana lagu uruuriyaa rinjiga midab madow, dhererkoodu waa ilaa 80 cm, ballaadhkoodu waa ilaa 6 cm. Midabka haramaha waa midab casaan ah. Duufaan ku yaalo Vriesia spleentia waxay u egtahay dhegta, peduncle waa mid dheer oo casaan leh. Ubaxyada ayaa ah midab huruud ah, kareemkuna waa casaan cad, dhalaalaya.
Vriesia Giant (Vriesea gigantea)
Ubax ee guriga ku dhow kuma jiraan. Sababta ayaa ah cabbirka weyn.
Baro wax badan oo ku saabsan ubaxyada noocan oo kale ah sida hatiora, clerodendrum, Kalanchoe Kalandiva, Campanula, dhirbaaxada cusub ee Guinean, plumeria, Miltonia orchid, Indica azalea, dhirbaaxo.
Waxay ka timid Brazil, waxayna ku koraan kaymaha kulaylaha. Cimilada awgeed, qoyaan badan ayaa jira xaaladaha ugu wanaagsan ee noocyadan. Caleemaha waa tiro badan, dhererkoodu ilaa 100 cm, ballac ilaa 9 cm. Qalabka cagaaran waxaa lagu qoraa lakabyo ama mawjado. Duufaanku waa noocyo badan oo ubax leh, dabacsan, jimicsi. Waxay ku taalaa isla jir.
Xaaladaha beerashada waxaa badanaa loo isticmaalaa goobaha xafiisyada ama labiska daaqadda.
Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah wakiillada ugu quruxda badan ee noocooda ah.
Caleemaha waa ciriiri, ballaaran. Waxay ku yaalliin balaashad. Calaamaduhu waa cagaar iftiin ah, oo isku dhejis ah, iyo inflorescence waxay u egtahay panicle.
Noocyo waa caydhin iyo ubaxyo jaale ah. Waxa kale oo jira noocyo hybrid ah oo leh xargaha midabka cas ama jaalaha ah.
Vriesia Dheecaan (Vriesea fenestralis)
Waxaa badanaa lagu koray aqallada lagu koriyo, sababtoo ah ubaxa waa qurxiyo. Qeybaha waxaa lagu uruuriyaa hunqaac, waxay yihiin cagaar cagaaran oo leh midab madow. Caleemuhu waa 40 cm oo dheer iyo qiyaastii 6.5 cm oo ballaaran, xarkaha ayaa labadaba ku siman labadaba. Inflorescences waxay gaartaa ilaa 50 cm oo dheer iyo ilaa 9 cm ballaaran. Ubax waa huruud ah, inflorescences waa cagaar madow leh dhibco bunni ah.
Sidoo kale vriezii, dhirta dhirta 'epiphyte' waxaa ka mid ah qolfaha asplenium, orchid multicii, xargaha xargaha, iyo feyladda.
Vriesia Sanders (Vriesea saundersii)
Asal ahaan ka yimid South America. Dhererka ilaa 40 cm Maqlaha waa meel bannaan oo gaaban. Caleemaha waa dhaldhalaal, cagaar, cagaaran, jilicsanaan jilicsan. Daaqada hoose waxay u egtahay midab guduudan. Dareenkooda waa jaale hurdi ah. Sidee ayuu ujirruhu ku xiran yahay noocyada ay ka mid tahay. Noocyada kala duwan ayaa waqtiyo kala duwen. Cagaarka laftiisa wuxuu u muuqdaa mid gardarro badan, sidaas darteed waxa uu ku fiican yahay gudaha casriga ah ee casriga ah. Waxaa qadariyay ubax qurux badan. Dhulka dalalka reer galbeedka ubaxa waa mid aad u badan. Kalluumaysatadu waxay keenaan noocyo kala duwan oo isku dhafan oo leh muraayad aad u dhalaal badan lehna ha u qaadan qolka badan ee qolka. Popular waa Vriesia Era, kaas oo ah dhirta ornamental aad u fiican oo leh ubax aan caadi ahayn.
Vriesia Mix ayaa ku haboon in lagu koro guriga - caleemuhu waa cagaaran dhalaalaya, on peduncle inflorescences oo u eg bouquet casaan ah oo ubax ah, iyo bracts waxay leeyihiin midabo badan oo, jaalaha ah ilaa casaan.
Waa muhiim! Qoyaan xad dhaafka ah ayaa waxyeello u leh vriezii. Xididdadu waxay bilaabi doonaan kallana. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero xaaladda hoose ee substrate. Waa inay qoyaan, laakiin ma qoyan.
Vriesia waa doorasho aad u fiican haddii aad go'aansato inaad soo baxdo dhirta gudaha. Ku soo kabashada asalka iyo daryeelka aan qabin. Waxaa si fiican u qurxin doonaa guriga ma xitaa gobolka ubax, laakiin inta lagu jiro ubax waxay ku farxi doontaa noocyo kala duwan oo ah midabyo dhalaalaya. Of Bromeliads tixgeliyey ubax aan la qabin. Nidaamka xididku wuu daciif yahay, waxaa loogu talagalay inuu hagaajiyo dhirta dushiisa. Cuntada waxay u dhacdaa iyada oo loo marayo caleemo iyo caleemo dheer, waxaa haboon in la tixgeliyo marka la quudinayo.
Isteroberyo loogu talagalay koox dhexe